Dumarka dalalka malasia iyo franceska oo laga kari layahay dhaqanka dumarka hindia - iftineducation.com
iftineducation.com – warbixin ayheshay alcayabiya ayaa sheegaysa inay dumarka ka soo jiida dalalka malasia,franciska ay inta badan ku hamiyaan inay qataan dahqan fara badan oo ay leeyahin dumarka india kunool.
mile hantoe oo ah gabadh ka soo jeeda dalka malasia ayaa sheegtay inay aad uxisayso inay qadato dhanka inbadan ay isticmalaan dumarka india,waxana ay intaasi ku dartay inay aad uga heshi cilaanka oo in tabadab ay siweyn u isticmalan dumarka hindida ah.
mile hantoe waxa ay intaasi ku dartay inay dhwaan xirir wada yeesheen ninkunool dala india gar ahaan magaalada kaashmiir,ayadoona inaasi ku dartay inay aad ugu faraxdo marka ay aragto dhaqan badan oo ay istic malaan gabdhaha hidia,ayadoo sheegat inay hada siweyn uga hesho cilaanka.
waxa sidoo kale jira sanadahani danbe dumarka ka soojeeda dalka faranceska oo xiliga xaflada lagu arkayey iyagoo xiranaya taashka gaar ka ah ee inta badan ay isticmalaan dumarka laqabo ama xaaska ah ee hindia, waxana kamid ah farantiga ay sanka dushiisa gashadaab dumarka daka india marka arooska.
Sharell Shock oo ah inika gabadhani xirirka ay la leedahay ayaa sheegay inay markasta oo ayjaceylkiisa wada hadlayaan ay ka waraysato dhanka kala duwan ee ay gabdha hindia istmalaan.
maha oo kali ah inta badan dalalkasi ku sida weyn u isticmaala hase ahate waxa jira dalal kale oo ay wadagaan shaqanka oo ay kamid tahay dalalka pagistan oo ay xidudu wadagaan.